Dabeecad wanaagsan waxay caawineysaa isku xirnaanta udhaxeysa awooda iyo hamiga. - qarsoodi - Quotes Pedia
Dhammaanteen waa nalagu barakeeyey kartiyo kala duwan iyo kartiyo kala duwan. Markaynu sii weynaaneyno, waxaa nalooga qaaday fursadihii kala duwanaa ee aan dooran laheyn qaabeynta nolosheena waxaanan si tartiib tartiib ah u bilaabeynaa inaan riyadayada gaarno.
Riyooyinkaasi waxay noqdaan kuwa xiisaha leh marka aan bilowno raadinta xaqiijinta. Waxay noqoneysaa hamigeenna iyo hamigeenna. Kahor intaadan dooran waxa aan eryanayno, waa inaan si sax ah u qiimeyno waxa aan ku soconno. Mar, waxaan indhaha ku hayney riyooyinkeenna, waa inaan adkeysan oo diirada saarna.
Waxaan arki doonnaa in caqabado kaladuwan ay soo marayaan habkayaga laakiin waxaas oo dhan, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la ilaaliyo dabeecad wanaagsan. Waad garan doontaa in marka aad sii koreyso in dabeecaddaada kaliya ay adiga kaa saareyso. Waxay kaa caawinaysaa inaad isku daydo waxa aad ka cabsanaysay oo dhan.
Waxaad naftaada uga badin doontaa tamarta wanaagsan ee aad ku soo kortay adoo maskaxda ku haya. U soo qaad guul-darada marinkaaga oo naftaada ka dood sidii aad uga gudbi lahayd guul darrooyinkaaga. Sidan, waxaad ka heli doontaa naftaada ku soo dhowaaneysa riyadaada.
Markaad ka adkaato dhibaatooyinka oo aad ku dhaqaaqdid, waxaad arki doontaa inaad awood u yeelan doonto inaad dadka kale ku dhiirrigeliso. Si tartiib tartiib ah ayaad awoodi doontaa inaad uxirirto farqiga udhaxeeya awoodaada iyo hamigaaga. Tani waxay runtii macnaheedu tahay helitaanka xalka iyo xoogga si aad wax uga beddesho xuduudahaaga oo aad sida ugu fiican u bixiso.
Tani waxay ka timid koritaanka dabeecad wanaagsan. Haddii aad diidantahay oo aad ka warwartid cawaaqibka, ka dib waad u jeedsan doontaa oo xooggaaga xoogga saari doontaa waxyaabo kaliya kaa horjoogsan doona. Sidaa darteed, naftaada ku hareereysan macquul, niyadsami, oo horay u sii wad hiigsashadaada gaaritaanka himiladaada.
Muuqaalka Muujinta Sawirrada
Soo Jeedinta Akhlaaqda Wanaagsan ee ugu Fiican abid
Quotes Akhlaaqda Wanaagsan
Xigashooyinka dabeecadaha dhiirigelinta
Xigasho On Akhriska
Xigasho Si fudud iyo dabeecad ahaan
Xigasho ku saabsan aragtida guuleysiga
Xigashooyinka gaagaaban ee fikradaha
Ha walwelin. Ilaahay had iyo goor wakhtigiisa Aamin isaga. - Qarsoodi
Haddii aad Ilaah rumaysantahay, uma baahnid inaad mar dambe ka walwasho waayo Ilaah mar walba wuu socdaa…
Waligeey ma arkin waji dhoola cadeyn oo aan qurux badneyn. - Qarsoodi
Waligeey ma arkin waji dhoola cadeyn oo aan qurux badneyn. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Caawinta dadka kale adoo aan rajayn inaad soo noqoto waa caawinta dhabta ah. - Qarsoodi
Caawinta dadka kale adoo aan rajayn inaad soo noqoto waa caawinta dhabta ah. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Samee wax maalin kasta aad u dhaqaaqdo higsigaaga. Soco oo soco. Samee UN. - Qarsoodi
Gaarista yoolkaaga maahan wax fudud. Waan fahmi karnaa inay tahay shaqo adag in…
Jacaylku waa inuu ku daweeyo oo uusan ku dhaawacmin. - Qarsoodi
Jacaylku waa mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan uguna quruxda badan ee aadanaha. Waa wax dadka abuuraya…